Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo kala Saxiixday heshiis horumarineed[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo kala Saxiixday heshiis horumarineed[Sawirro]
MUQSISHO – Wasaaradda Beeraha & Waraabka ee Soomaaliya iyo Dowlada Turkiga ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday Mashruuc Horumarineed.
Munaasabadan oo ku saabsaneyd mid Mashaariic horumarineed ay ku kala saxixanayeen Wasaaradda Beeraha Dowladda Federaalka iyo Hay”adda Horumarinta dalka Turkiga ee TiKA ayaa ujeedada tahay wax ka qabadashada biya xireenada wabiga shabeelle, Saabuuni iyo keydka Biyaha Xawaadleey.
Waxaana goobjoog ka ahaa Ku simaha Ra”iisul Wasaaraha ahna Ra”iisul Wasaare Ku_xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guleed, Qaar ka mid ah Golaha Wasiirada, Ganacstada beeraleyda dalka,Safiirka dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga iyo Madaxda Hay’adda TIKA.
Sidoo kale,Wasiirka Beeraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in Heshiiskaan uu wax badan ka tari doono Fatahaada uu sameeyo Wabiga,islamarkaana dhibaato geystay dhul beereed iyo sidoo kale deegaano badan oo dad degan yihiin.
1. In Wax soo saarka dalka Kordho lana yareeyo Cunada yarida iyo Gaajada.
2. Helitaanka Biyo joogta ah Waraab ha noqoto ama Xoolaha oo ka faa’idaya ha noqoto.
3. in la maareeyo Fatahaada Wabiga marka uu soo jabo baabi’inaya Beerihii dalagii,gurihii u gudbaya baa’i’inaya isku socodkii kala xiraya,taa iyana wax badan ayay ka tareysaa.
4. dhaqaalihii baa korayaa marka ay beeraha soo go’aan, shaqaa abuuranta ee wax soo saarkii kordho.
5. Dhoofkii baa iyana oo wax soo saarka aanu soo saarno suuqooda inuu furaan kala hadalnay ayay wax badan ka tareysaa.